DeHavilland Dash7FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 10 936
Size: 78.6 ကို MB
FS2004 ဆိပ်ကမ်းကျော် DeHavilland7Dash - နှင့်အတူတွဲဖက်မ FSX/P3Dဒီအထုပ်သုံးမော်ဒယ်များ, 2D panel ကိုနှင့်ထုံးစံ gauge, ထုံးစံအသံနှစ်ခုပျံသန်းမှုမော်ဒယ် options များနှင့်7liveries ပါဝင်သည်။ ထိပ်တန်းအရည်အသွေး။ အရေးကြီးလည်း7တစ် ci သည် Dash အဖြစ်လူသိများသည့် documentation.The က de Havilland ကနေဒါ DHC-7 ဖတ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
လိုက်ဖက်တဲ့ FS2004 နှင့်အတူ OK ကိုစမျးသပျ
စာရေးသူ မီလ်တန် Shupe, စကော့သောမတ်စ်, ကို Mike ကယ်လီ, Bernt Stolle, တွမ် Falley, Nigel Richards
FS8 ဘို့ DeHavilland DHC202-Q 2004 ပက်ကေ့ ဒေါင်းလုပ်
Downloads:7121
Size: 15.39 ကို MB
အတွက် FSX ယခင်ကက de Havilland ကနေဒါအဖြစ်လူသိများဤနေရာတွင်သဟဇာတမူကွဲကလစ်အဆိုပါ Bombardier Dash 8 သို့မဟုတ်မေးစီးရီး, 8 သို့မဟုတ် DHC-8 Dash, အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ်, အလတ်စားအကွာအဝေးတစ်ခုစီးရီး, တာဘိုပရော့ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ 1984 အတွက်က de Havilland ကနေဒါ (DHC) ကမိတ်ဆက်သူတို့ယခု Bombardier လေကြောင်းကထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ... ဆက်ဖတ်ရန်
de Havilland DH-80A Puss ပိုးဖလံ FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Downloads:3998
Size: 15.8 ကို MB
အဆိုပါက de Havilland DH 8OA "Puss ပိုးဖလံ" မြန်နှုန်းမြင့်မှာတာဝေးပစ် Tour များအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ 30 ရဲ့အခန်း monoplane ကနေတစ်ဦးနှစ်ဦး / သုံးထိုင်ခုံနေရာ, High-တောင်ပံခဲ့သည်။ ဒါဟာပျံသန်းတူရိယာထဲမှာလေယာဉ်မှူးကိုလေ့ကငျြ့ဘို့ကို "Hawk ရဟတ်ယာဉ်ပိုးဖလံ" ကဲ့သို့တူညီသောခေတ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အလွန်ကြီးစွာသောအသေးစိတ်နှင့်ကုဗနှင့်ဖွဲ့ကအလွန်လှပသောပုံစံဒီဇိုင်းကို ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ မီလ်တန် Shupe, တွမ် Falley, စကော့သောမတ်စ်, ကို Mike Hambly
DeHavilland DHC7VC ကိုခရီးသည်တင် Edition ကို FS2004 based HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 11 012
Gmax အတွက် Modellized ကစစ်မှန်အနက်ရောင်ပုလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ add-on ဟာသူ့ရဲ့အနည်းဆုံးအသေးစိတ်ကိုနှင့်အတူပြီးစီးသို့ဆောငျခဲ့ havs ။ , ဘော်ဒါလှေကားနှင့်အတူမြောက်မြားစွာကာတွန်းအစိတ်အပိုင်းများ, အလင်းအိမ်, ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ခရီးသည်ထွက်ပေါက် ... : တစ်ကြက်သရေကို virtual လေယာဉ်မှူးအခန်းနှင့်အတူအဆိုပါ 3D အခန်းအပြည့်အဝ operative.Most ထူးခြားပြောင်မြောက် features တွေဖြစ်ကြသည် ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ မီလ်တန် Shupe, စကော့သောမတ်စ်, ဂျိုအာ Paz, et ၏သားတို့က de အာရုန်ကိုလိမ်
DeHavilland ဗိုက်ကင်း DHC6-400 အမွှာ Otter FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Downloads:7783
Size: 14.8 ကို MB
အတွက် FSX အမွှာ Otter ဘို့သဟဇာတဗားရှင်းကလစ်ကဒီမှာကို Global ဝယ်လိုအားဗိုက်ကင်း Air ကိုကနဦးအကူအညီက de Havilland ကနေဒါနှင့်အတူ Calgary, ကနေဒါတွင်၎င်း၏စက်ရုံမှာအသစ်သောပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်းစတင်ခဲ့ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုပုံစံ -400 -300 Honeywell အပြင်ဘက်မှတူညီဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အတူ " ... ဆက်ဖတ်ရန်
Dehavilland Bombardier Dash8-Q311 - လန်ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Downloads:7801
Size: 16.2 ကို MB
အတွက် FSX ဒါကြောင့်လက်လွတ်မ hereDo သဟဇာတဗားရှင်းကိုကလစ်နှိပ်ပါ! Excellent က add-on ကိုအရည်အသွေးမြင့်, ပြည့်စုံပေမယ့်ရိုးရှင်းများနှင့်အလွန်သာယာသောလေယာဉ်၏။ အဆင့်မြှင့် 2D panel က, updated ပြောင်းလဲနေသော VC ကိုအပြည့်အသံ, အပြည့်အဝရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းများ, ပြောင်းလဲနေသောထွန်းလင်းသက်ရောက်မှု, airstair လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကုန်တင်တံခါး, မျက်နှာပြင် rad နှင့်အတူနယူးဒီဇိုင်းကို ... ဆက်ဖတ်ရန်
DHC-6 Long ကနှာခေါင်းဝယေံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 8 179
Size: 19.7 ကို MB
ဟာဝယေံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရဲ့ Virtual လေကြောင်းလိုင်း, လှပသော repaint ။ သစ္စာဝါဒီအပြင်ဘက်လှပသောမော်ဒယ်, ပြီးပြည့်စုံ 2D panel ကိုကောင်းစွာအမွှာ Otter ကနေဒါ DHC-63မှဖြစ်ပေါ်လာသည့် DHC-6 Otter က de Havilland တစ် STOL utility ကို monoplane.Evolution ဖြစ်သကဲ့သို့လည်းလူသိများ done.The က de Havilland ကနေဒါ DHC-1964, ပိုကြီးနှင့် eq ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Voir fichier readme
သာလျှင် 2D Panel ကို
က de Havilland ကနေဒါ DHC-1 Chipmunk FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 11.36 ကို MB
ဒါကတစ်ဦးစံပြလေယာဉ်ပျံများနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပါ! ကျနော်တို့ကပိုမပြောနိုင်, ကကြိုးစားကြည့်ပါ! 13 repaints အတွက်ရရှိနိုင်။ လေယာဉ်မှူးနီးပါးကိုမှန်ကန်ဖြစ်ပါသည်, သူ့ကိုရွေ့လျားကြည့်ရှု! ထိပ်တန်းလေယာဉ်ပျံ။ ထိပ်တန်း panel က။ ဂရိတ်အသံ။ လည်း (ပြင်သစ် chipmunk အတွက်) Chipmunk အဖြစ်လူသိများအရည်အသွေးအ work.The က de Havilland ကနေဒါ DHC-1 ဘို့စာရေးသူမှကျေးဇူးတင်ပါသည် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ရစ်ခ် Piper, Dave Booker, Saverio Maurri